Paragoay, Manidina Ny Omby, Mirodana Ny Sekoly · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Laura Vidal, Kurtural Nandika (en) i Sara Holmes, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 24 Oktobra 2016 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Български, Ελληνικά, polski, Español
“Aza avela hirodana ny fanabeazana.” Sorabaventy nampiasaina tao amin'ny iray amin'ireo fihetsiketsehana marobe mitaky ny fanatsarana ny fampianarana tao Paragoay. Sary avy amin'i Kurtural, nahazoana alalana.
Ity lahatsoratra ity no voalohany amin'ireo andian-dahatsoratra navoakan'ny tranonkalam-baovao ara-toekarena sy ara-kolontsaina Paragoaina Kurtural. Nahazoana alalana ny dikan-dahatsoratra nisy novaina eto ambany.
Rava nandritra ny taona maro ny rafi-panabeazana tao Paragoay, ary miteraka fifandonana sy tsy fahafaham-po ny rafi-panabeazana amin'izao fotoana izao
Na dia teo aza ny fandrahonan'ny minisitry ny fampianarana ao Paragoay, Enrique Riera, mpianatra an'arivony no nidina an-dalambe tao amin'ny tanàna renivohi-pirenena, Asunción, tamin'ny volana Mey, mitaky ny fanatsarana ny fotodrafitrasan'ny an-tsekoly izay mirodana ara-bakiteny. Nampitandrina ny mpianatra i Riera fa ho saziana izay rehetra manatrika ny fihetsiketsehana, raha hotapahana kosa ny karaman'ny mpampianatra.
Mandritra izany fotoana izany, tao amin'ny Oniversitem-Pirenena ao Asunción, nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana ny mpianatra mba hiaro ny fanavaozana ny rafi-pampianarana, na dia teo aza ny didin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ho an'ireo filohan'ny oniversite hampitsahatra izany. Sambany teo amin'ny tantara, nitokona ny sampam-pianarana rehetra. Ny sasany amin'ireo fangatahana fanavaozana dia ahitana fitakiana hanambaràna ny hamehana amin'ny foto-drafitrasan'ny sekoly sy ny fampandrosoana ny kalitaon'ny fampianarana eny anivon'ny oniversite. Araka ny filaharana iraisampirenena, iray amin'ireo ambany indrindra ny fampianarana Paragoaiana eo amin'ny lafiny kalitao.
Ireo fihetsiketsehana ireo, izay fihetsiketsehana lehibe indrindra ankehitriny ho fanohanana ny fanavaozana ny fanabeazana dia mariky ny krizy ara-panabeazana lalina ao Paragoay, sy ady eo amin'ny vondron'olona roa koa: ny kilasin'ny vitsy an'isa matanjaka izay nandrombaka ny rafi-panabeazana hitazonana ireo tombontsoa sy ny maro an'isa izay te hitondra ny fahatsapana fahafahana rehefa miverina mankany amin'ny fanabeazana. Mampiseho ny ampahany amin'ity tolona ity ny lahatsoratr‘i Camila Vollenweider ary navoakan'ny ny Foibe Stratejika Amerika Latina ara-Jeografia-Politika:
Nitondra [ity olana ity] hiharihary nandritra ny tolona tao anatin'izay taona maro faramparany izay ny mpianatra Paragoaiana: amin'ireo oniversite 53 misy ao amin'ny firenena, tsy miankina ny 45, ary ny valo an'ny fanjakana dia ahitana saram-pianarana ihany koa; 32 amin'ireo oniversite 53 ireo no tsy nahazo fanamarinana avy amin'ny Sampam-panjakana misahana ny Fanombanana sy ny Fankatoavana ny Fampianarana Ambony, toe-javatra nahatonga ny fihanaky ny antsoina hoe “oniversite garazy”, ary voalaza fa vao nisoloky mpianatra 6.000 vao haingana [ …]
[Ny] teti-bolan'ny harin-karena faobe 4,1% izay arotsaky ny fanjakana ho an'ity resaka (fanabeazana) ity dia tena lavitry ny 7% izay takian'ny UNESCO […] Efa tamin'ny didy jadon'i Stroessner [nanomboka taona 1954 ka hatramin'ny taona 1989] ity politikan'ny fampianarana ankehitriny ity, ary tsy dia niova loatra hatramin'ny nitondran'i Cartes [Filoha ankehitriny]. Tsy ampy ny teti-bola natokana ho an'ny fanabeazana – na dia nitombo aza izany tamin'ity farany ity – sarotra kokoa ny fidirana any amin'ny oniversitem-panjakana, ara-politika ny fepetra ao ambadiky ny fanendrena filohan'ny oniversite sy sojabe, ary omena ny foiben'ny oniveriste tsy miankina ny fampiroboroboana sy ny fitomboan'ny famatsiam-bola sy ny vatsim-pianarana ka lasa voa ny rafitra miankina amin'ny fanjakana.
Fampianarana atao fihariana sy “lakilen'ny fanangonana fahefana ara-politika”
Mtiondra antsika akaiky kokoa amin'ity ady ity ny tantaran'ity andian-dahatsoratra ity, “Ombivavy manidina, sekoly mirodana,” (“Vacas que vuelan, escuelas que caen“). Mifantoka amin'ireo maherifo miatrika tolona isan'andro izy ireo mba hahafahan'ny ankamaroan'ny ao Paragoay hisitraka ny zo hianatra; tolona izay tsy tokony hisy akory, raha ankatoavina tokoa ho zo ao amin'ny firenena ny fanabeazana.
Ny halafon'ny fahazoana miditra mianatra dia azo jerena amin'ny tantaran'i Christian Quiñonez, izay manao veloma isan'andro ny zanany alohan'ny hamonjeny ny oniversite ary miampita ny Renirano Paragoay hianarana lalàna, ary tsy mahafantatra raha mbola tafaverina velon'aina soa aman-tsara izy. Na ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly Maricevich, ao amin'ny faritra avaratry ny firenena, izay tsy maintsy miaritra ny fanorisorenana ataon'ny vondrona mitam-piadiana, miaramila, polisy, mpivarotra zava-mahadomelina, sy lehilahy mpidaroka mba hampianatra ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Na amin'ny tantaran'ireo ankizilahy sy ankizivavy 46.000 izay tsy maintsy manaiky ny rafitra fanandevozana manararaotra ny ankizy rehefa te-hankany an-tsekoly.
Raha tsy azo antoka ny zo hahazo fanabeazana, mety ho lasa na fitaovam-pihariana haingana na fanalahidy hanangonam-pahefana ara-politika. Manohintohina ny tena maodelin'ny famokarana ankehitriny ny krizin'ny fampianarana, izay tokony hamorona loharanon-karena ho amin'ny mahasoa ny tsirairay. Raha mahavita manondrana ombivavy velona mandeha fiaramanidina isika – firenena voalohany ao Amerika Atsimo nanao izany – nahoana no mirodana ny sekoly kanefa misy mpampianatra sy mpianatra ao amin'izany?